flag Name Is Skrillex
Inguqulo 0.3.3 – 9 Izilimi ezintsha
September 6, 2009 by okunikezwayo 12 Amazwana
Sithanda ukubonga -Google yokwengeza nokweseka 9 izilimi ezintsha: Afrikaans, Belarusian, Icelandic, Irish, EMakedoniya, IsiMalay, Middle, IsiWelshi and Yiddish. Siye wanezela usekela plugin yethu wordpress okusho wathatha isikhathi esincane ngenxa udaba elandelayo esibucayi. Imuphi flag okufanele basebenzise for Yiddish? Into yokuqala sifuna ukusho wukuthi amafulegi kukhona shintshekayo, nje balandele FAQ futhi uma ungathandi esikukhethayo, akukho muntu ukuphoqa nawe.
Ngemva mpikiswano iDemo sinqume ukunikeza Yiddish European Union flag ngenxa yezizathu ezimbili, eyodwa – limi eqale kukhona, hhayi kunoma iliphi izwe ethize futhi kwesibili – ifulege asisho amele izwe ethize ngendlela efana limi esingenakubalwa exhunywe yiliphi izwe. Uma umuntu iziphakamiso ezingcono, siyizisebenzi ivulekile ukuzwa kubo.
Lo ukukhululwa godu kulandela emasontweni ambalwa uthule, lapho siye buthule ngicabanga nokuxoxa izici ezintsha, okuyinto sethemba sizobe sesikwazi ukukhipha ngokushesha, usizo futhi umbiko ngeke kuphela baziswa kodwa futhi isisize khulula umkhiqizo kangcono.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: flag Name Is Skrillex, google ukuhumusha, minor, izilimi ezingaphezu, ukukhululwa, plugin wordpress
Inguqulo 0.2.8 – CSS Name Is Skrillex
July 19, 2009 by okunikezwayo Shiya amazwana
Le nguqulo entsha unezela support yokulinga for CSS Name Is Skrillex. Lokhu kunciphisa izikhathi page load (lapho kusebenza) futhi kuthuthukisa speed page Google kanye Yslow ezikhombisa Yahoo sika. Kukhona iqoqo ikhodi emuva ekupheleni okuvumela Name Is Skrillex ukuba wadala uvumelane nezidingo zomuntu (uma une amafulegi eziyisithupha kuphela hhayi 40, kungani ukusebenzisa isithombe 12K?). Lokhu ayikatholakali – kodwa singakwazi ukunikeza amafayela lesifanele ubani iyazidinga, nje xhumana nathi noma aphawule ngalolu post. Sifisa ukubonga ngokukhethekile Marek Fiser usizo lwakhe kanye CSS owamsiza ukuba balahle the blank.gif manje engenamsebenzi, hhayi kuphela amafayela CSS kodwa in the interface translation.
A izimbungulu ambalwa fixed kule nguqulo, esukela usebenzisa livewriter kuya inkinga abuyele olimini in the iwijethi, the log ushintsho umngane wakho lapha.
Enye isicelo – sicela usebenzise trac yethu (trac.transposh.org) ifayela izimbungulu, lokhu kusisiza (nawe) uthole izimpendulo ezingcono futhi ngomkhondo on izimbungulu ngentuthuko, futhi sisivumela ukuba ugweme umsebenzi ngeduplikhethi.
Sithemba uyophila lokhu ukukhululwa.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: CSS sprites, flag Name Is Skrillex, minor, ukukhululwa, plugin wordpress
CSS Name Is Skrillex ozayo
July 9, 2009 by okunikezwayo 3 Amazwana
The version elilandelayo, okuyinto uyeza ekupheleni ngesonto elizayo ayohlanganisa support for CSS Name Is Skrillex for the iwijethi flag. Lokhu kunezimo ngokwemigomo ijubane kanye nenombolo ye izicelo ezenziwe ku-server web. Ikhodi kakade asebenzayo kule site futhi siyojabula ukuthi usazise of inkinga nazo side amaklayenti (non standard iziphequluli – IE6, njll).
Noma ubani ukuthi ufuna ukuthatha ikhodi for a spin, ezingaphezu kuka wamukela uxhumane nathi ukuze uthole ikhodi pre-release.
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele Umake With: CSS sprites, flag Name Is Skrillex